Somaliland oo Gacan Siinaysa Al Shabaab – Rasaasa News
Somaliland oo Gacan Siinaysa Al Shabaab
Hargeysa, November 6, 2011 [ras] – Warar xog ah oo aan ka helay masuuliyiin ka tirsan maamul gabaleedka Somaliland oo codsaday in aan magacood la sheegin ayaa bogga rasaasa.com u sheegay in Berbera ay noqotay meel ay Eritrea taageero mariso ururka Al shabaab xili ay dawlada Kenya dagaal kula jirto Shabaabka.
Dhawaan ayey ahayd kolkii ay magaalada Hargeysa lagu soo dhaweeyey xubno u dhashay gabalka waqooyi galbeed ee Somaliya [Somaliland], oo ka tirsan ururka wax iska caabinta Somaliya oo ay isku mawqif yihiin ururka Al shabaabs.
Xubnaha ka soo kicitimay Caasmara, waxay ka koobanaayeen sadex xubnood, waxaana hogaaminayey Jaamaca Maxamed Qaalib, waxayna mudo labo todobaad ah ku sugan yihiin Somaliland.
Safarka waftigan ka yimid dalka Eritrea ee haatan jooga Somaliland, ayaa soo gaadhsiiyey madaxweyne Siiraanyo warqad fariina oo uga timid Afwarqo, madaxweynaha Eritrea.
Labada maamul ee Eritrea iyo Somaliland ayaa waxaa ka dhaxeeya xidhiidh qarsoon oo ay u kala dabqaadaan dad dibadaha degan oo aan la tuhunsanayn saldhigooduna yahay dalka Ingriiska. Xubnahaas ayaa waxaa ka mid Zakariye Xaaji Cabdi.
Xidhiidhka labada maamul ayaan la ogayn waxa uu salka ku hayo, waxayse ujeedadu tahay in deganaan la,aan laga abuuro geeska Afrika. Masuuliyiinta ugu saraysa ururka Al Shabaab,ayaa ka soo jeeda waqooyi galbeed Somaliya [somaliland], waxaana suurto gal ah in wada shaqayn qarsoon ay ka dhaxayso Al Shabaab iyo Somaliland mudaba.
Sida la xaqiijinayo kaalmada milatari ee uu helo ururka Al shabaab ayaa 70%, waxaa uu soo maraa Somaliland. Sida ay wararku sheegeen, dayaaradaha degay Baydhaba todobaadkii tagay, ayaa ka soo duulay garoon milatari oo ku yaal Bebera, horayna Ruushu u isticmaali jiray. Diyaaraha ayaa la sheegay in ay hub u sideen Al shabaab,in kasta oo ayna jirin cid cadayn karta wax ay sideen.
Diyaaradaha geeyey saanada magaalada Baydhaba, ayaa ahaa kuwa qaada qalabka ciidamada waxaana lagu sameeyey dalka Ruushka, sida la sheegay waxaa laga leeyahay dalka Kasakhstan.
Imaanshaha Jaamac Maxamed Qaalib ee Somaliland, ayaa lagu sheegay in uu ahaa mashquulin saxaafada iyo siyaasiyiinta Somaliya, si ay u fusho hawsha saanada ee u socotay Shabaabka.
Somaliland ayaa hore u diidi jirtay in ay yimaadaan Somaliland siyaasiyiinta Somaliyeed, gaar ahaana kuwa u dhashay waqooyi galbeed Somaliya. Laakiin imaansha Hargeysa ee Jaamac Maxamed Qaalib ayaa ahayd mid ka gadisan hab dhaqankii Somaliland. Maalin ka dib waxaa Hargeysa yimid Cabdala Xaaji Cali oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliya waana la xidhay, in kasta oo kolkii dambe la sii daayey.
Jamac Maxamed Qaalib ayaa la sheegay in ay la socdeen dhawr ruux oo ka soo raacay dalka Eritrea. Jaamaca, ayaa wargayska Qarannews u sheegay in uu Hargeysa u yimid in uu arko eheladiisa dhawaana uu ku laaban doono Caasmara.
Dadka Somaliland kaga imanaya dhinaca Eritrea ayaa khatar wayn ku ah dalalka dariska oo ay colaadi ka dhaxayso xukuumada Eritrea. Somaliland waa meesha kaliya ee xidhiidh la leh dalka Eritrea oo dhibaato ku haya dalalka bariga Afrika.
Somaliland oo ahayd meelaha ugu nabdoon Somaliya, in badana isku dayeysay in ay ka go,odo Somaliya, ayay dhagta UN-tu ugu sheegay in ayna suurto gal ahayn gooni isutaag.
Maamulka Somaliland ayaa hurin jiray colaada Somaliya si ay uga faa,iidaysato gooni isutaag inta ay Somaliya dhibaatadu ka jirto.
Arimahan taageerada Al Shabaab ee haatan uu bilaabay maamulka gabaleedka Somaliland, ayaa cawaaqib xumo u keeni kara nolosha iyo nabada ka jirta Somaliland iyo waliba masuuliyiinta maamulka. Xili uu noqday dagaalka lagula jiro Al Shabaab mid caalami ah oo ay dalalka darisku si xoog ah faraha ugula jiraan Somaliya.
Swedes Deny Backing Ethiopian Rebels
Eritrea Raising Money in Canada, Financing Terrorists to Attack Canada